Muranka Baarlamaanka Soomaaliya - BBC Somali
Muranka Baarlamaanka Soomaaliya
13 Disembar 2011
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta shir ku yeeshay Muqdisho.
Waxay sheegeen in ay doonayaan in Guddoomiyaha, Shariif Xasan Shiikh Aden, ay xilka ka qaadaan.
Waxaa kale oo ay sheegeen in Guddoomiye ku xigeenku uu ka diiday in uu baarlamaanka fadhi u qabto.
Sidaa darteed iyaga ayaa iskood u fariistay, ka dibna waxay sheegeen in ay xilka ka qaadeen Guddoomiye, Shariif Xasan Shiikh Aden.
Arrintaan marka dhinac laga fiiriyo waxay u muuqan kartaa mid aan miisaan siyaasadeed lahayn, maaddaama aan Guddoomiyaha, iyo ku xigeennadiisa midkoodna aanuu fadhin goobta, baarlamaankuna u dhammayn go'aankan, welibana lagu muran san yahay tirada mudanayaasha goobtaa tegey.
Laakiin marka la fiiriyo in fadhigu ka dhacay Guriga Umadda, oo ah xarunta Baarlamaanka, oo ay ciidammada AMISOM ay ilaaliyaan, waxay dhalineysaa su'aalo dhowr ah.
AMISOM uma sahlana in baarlamaanka ay u furto mudanayaal aan Guddoomiyaha iyo ku xigeennadiisa midna la socon.
Markaa dadka qaar waxay is weydiin karaan in arrintan ay qeyb ka yihiin Villa Somalia iyo Villada kale ee ka soo horjeedda midkood.
Ra'iisal Wasaaraha wey ku adkaaneysaa in uu mawjadda baarlamaanka ka hor yimaado, hadduusan la dabaalan karin.
Laakiin Madaxweynaha waxaa khasab ku noqoneysa in uu mowqif ka qaato arrintan, oo ama aqbalo go'aankan, ama uu ku tilmaamo in uu yahay mid aan waxba ka jirin oo aan sharciga waafaqsaneyn.
Dowladda oo xilagga u haray uu yahay dhowr bilood, ma jiro xilli ka xun oo ay geli lahayd qalaalse noocan ah, oo laga yaabo in uu sii jiitamo amaba ka sii daro inta aan xal loo helin.
Baarlamaanka waxaa xilligiisu ku eg yahay bisha August ee 2012. Muddadaasna iyaga ayaa go'aan u leh in ay culeyska saaraan in ay Madax xilka ka qaadaan, qaar kalena ay u doortaan hadba inta bilood ee u hartay iyo in ay culeyska saaraan in ay saameyn ku yeeshaan aayaha siyaasadeed ee dalka.